पुडासैनी आत्महत्या प्रकरण- सबै काम सक्यौँ : अदालत, आजै फैसलाको सम्भावना – Chitwan Post
पुडासैनी आत्महत्या प्रकरण- सबै काम सक्यौँ : अदालत, आजै फैसलाको सम्भावना
भरतपुर । चितवन अदालतमा पत्रकार शालिकराम पुडासैनी सम्बन्धमा रहेको आत्महत्या दुरूत्साहन मुद्दामा आज आइतबारका लागि पेसी तोकिएको छ । गत कात्तिक २२ गतेपछि आज माघ ५ गते पेसी रहेको अदालतका श्रेस्तेदार सूचना अधिकारी रूद्रमणि गिरीले बताए । कात्तिक २२ गते विशेषज्ञ बुझ्ने आदेश अदालतबाट भएको थियो ।
‘न्यायाधीशको आदेशअनुसार सबै काम सकिसकेका छौँ’, सूचना अधिकारी गिरीले भने,‘वादी तथा प्रतिवादीका वकिलबाट मुद्दाको पेसी सार्ने काम भएन भने आजै मह¤वपूर्ण निर्णय हुन सक्छ ।’ मुद्दाको सबै अंग पुगेको र बुझ्नुपर्ने मानिसहरु सबैसँग बुझिसकेकाले कुनै काम बाँकी नरहेको उनले बताए । यस मुद्दा जिल्ला मुख्य न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासमा छ ।
अदालतको आदेशअनुसार विशेषज्ञहरुसँग वकपत्र लिइसकिएको छ । मोबाइल परीक्षण विशेषज्ञ दुर्गाकुमार बोम्जनसँग वकपत्र गरिसकिएको उनले बताए । मृतक र प्रतिवादीको मोबाइल परीक्षण गर्ने बोम्जनसँग अदालतले सोधपुछ गरेको हो । त्यस्तै पुडासैनीको शव पोष्ट मार्टम गर्ने डाक्टरहरु डा. विभूति राणा र डा. मनि महर्जनसँग पनि बकपत्र लिइसकिएको छ ।
वादी र प्रतिवादीतर्फका साक्षीहरुसँग वकपत्र लिन थालिएको छ । वकपत्र सकिएपछि मुद्दाको पेसी चढ्ने छ । यस घटनाको सम्बन्धमा भेसेरा परीक्षण रिपोर्ट भने अझै आइनसकेको अदालतले जनाएको छ ।
पुडासैनीको श्रीमती सम्झना र जाहेरवाला चितवन प्रहरीका तत्कालीन डिएसपी दीपेन्द्र शाहसँग वकपत्र गरिसकिएको अदालतका सूचना अधिकारी रूद्रमणि गिरीले जानकारी दिए ।
वादीतर्फ १५ जना साक्षी छन् भने प्रतिवादीतर्फ पनि ७ जना जति साक्षी रहेकाले ३ दिन लगाएर वकपत्र गरिएको थियो । साउन २० गते नारायणगढको कंगारू होटलमा नुवाकोट घर भएका शालिकराम पुडासैनी झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका थिए । उनले आफ्नो मृत्युको कारण रविलाई मुख्य बनाएपछि यो मुद्दा चर्चामा छ ।
भदौ ९ गतेको चितवन अदालतको आदेशले ५ लाख धरौटी बुझाएर रवि, ३ लाख बुझाएर युवराज र शुद्ध तारेखमा कार्की रिहा भएका थिए । उच्च अदालत हेटौँडाको अघिल्लो महिनाको आदेशअनुसार रविलाई विदेश जानको लागि भने फुकुवा भएको छ । चितवन अदालतले धरौटी मागसहित पासर्पोटसमेत बुझाउन भनेको थियो । धरौटी माग र पासर्पोटसम्बन्धी आदेश चित्त नबुझेपछि रवि उच्च अदालत हेटाँैडा गएका थिए ।